Shirka Guddiga Fulinta Gos oo Muqdisho ka dhacay + Sawirro | Somchess.net
You are here : Somchess.net » Sawirada » Shirka Guddiga Fulinta Gos oo Muqdisho ka dhacay + Sawirro
Guddiga fulinta Gos oo ayaa maanta shir ku yeeshay magaalada Muqdisho, shirkan oo ah mid sanadkiiba afar jeer la qabto ayaa looga hadlay arimo badan oo ay ka mid ahaayeen , warbixinadii iyo waxqabadki sanadki la soo dhaafay iyo qodobo dhowr ah oo lagu balan sanyahay in beri horgeeyo shirwaynaha guud, Sida ansaxanita howlaha iyo dhaqaalaha sanadkan.
Shirka ayaa sidoo kale looga hadlay soo gudbinta siyaasada horumarinta isboortiga gobolada dalka, waxaaa laysku raaciya in gobolada laga dhisayo wax yaabaha aasasiga isbortiag ku hormari karo, sida aqoonta maamulka iyo shuruucda.
Guddiga fulinta ayaa dhanka kale soo bandhigay astaan cusub ay yeelanayso Gos. taasoo lagu badalo astaantii hore, nidaamka badalka astaanta ayaa ah talo ay guddiga olombikad aduunka u soo wdamad aku midaysan IOC oo ay Soomaaliya ka mid tahay.
Ugu dambayn guddiga ayaa soo jeediyay in xubno kale lagu soo daro guddiga fulinta iyadoo ajandahaas la hor gayn doono shirwaynaha.
« Xiriirka Soomaaliyeed ee K/Gacanta oo ciyaartooy kala duwan u sameeyay Xaflad Sagootin ah + Sawiro
FIDE President is elected to SportAccord Council »